कालापानीबाट सेना हटाउन निर्देशन दिएपछि भारतीय मिडियाको हेडलाइनमा ‘प्रधानमन्त्री ओली’ |
काठमाडौँ : नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय मिडियाको हेडलाइन बन्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिबाट सेना हटाउन निर्देशन दिएपछि भारतीय मिडियाले उक्त समाचारलाई विभिन्न हेडलाइनमा प्रकाशन गरेका छन्। भारतीय मिडिया आजतकले ‘कालापानीका विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई देखाए शक्ति, एक इन्च जमिनपछि दिदैनौँ’ भन्ने हेडलाइनमा समाचार प्रकाशन गरेको छ।
आजतकले लेखेको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भने- आफ्नो देशको सीमा सुरक्षा गर्नका लागि हाम्रो देश पूर्ण रुपमा सक्षम छ। देशको सुरक्षा बल आफ्नो जमिनमा आफ्नो अधिकार फिर्ता लिनका लागि एक जुट छन्।’
राष्ट्रभक्त सरकारले कसैलाई पनि एक इन्च जमिनमाथि पनि कब्जा गर्न नदिने बताएको पनि सामाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै हिन्दी बीबीसीले लेखेको छ, ‘कालापानी विवादमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, भारतले एक इन्च जमिन पनि पाउँदैन्।’त्यस्तै पुष्जव केसरीले ‘कालापानी विवादमा भारतलाई आँखा देखाइरहेको छ नेपाल, प्रधानमन्त्री ओलीले गरे ठूलो निणर्य’ भन्दै आफ्नो समाचारको हेडलाइन बनाएको छ।
नेपाल बंगलादेशसित ८ विकेटले पराजित
बंगलादेशमा जारी एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल घरेलु टोली बंगलादेशसँग पराजित भएको छ ।ढाकास्थित साभार क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको समूह चरणको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ८ विकेटले पराजित भएको हो ।नेपालले दिएको १३९ रनको लक्ष्यलाई बंगलादेशले २४ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै भेट्टायो ।
यस जितसँगै लगातार तेस्रो जित निकालेको बंगलादेश समूह ‘बी’को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ । यसअघि, बंगलादेशले हङकङ र भारतलाई पराजित गरेको थियो । बंगलादेशको जितमा नजमोल हुसेनले सर्वाधिक ५९ रनको योगदान दिए । ५६ बल खेल्दै उनले दुई छक्का र ६ चौका प्रहार गर्दै अविजित ५९ रनको योगदान दिएका हुन् । त्यस्तै, बंगलादेशका अर्का ब्याट्सम्यान मोहमद्द नाइमले ४५, यसिर अलीले १८ तथा सोम्य सरकारले ११ रनको योगदान दिए ।
त्यस्तै, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २२ रन जोड्दा करण केसीले १८ रन जोडे । कुशल भुर्तेलले १०, करण केसीले १८, आरिफ शेखले ११, पवन सरार्फले ९, विनोद भण्डारीले ८, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह एरीले ६ तथा शरद भेषावकरले एक रन जोडे ।
बलिङतर्फ बंगलादेशका सैयद मिन्हाजुल आबेदिन र सुमन खानले समान ३/३ विकेट लिए भने तनवीर सिंह र मेहदी हसनले २/२ विकेट लिए । हारसँगै नेपालको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना भने न्यून भएको छ । यसअघि, बिहीबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग ७ विकेटले पराजित भएको थियो भने शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले हङकङलाई ४० रनले पराजित गरेको थियो ।
२०७६, १९ मंसिर बिहीबार ०९:३६
२०७६, १८ मंसिर बुधबार ११:२४
खुशीको खबर ! रवि लामिछानेले शुरु गरे नयाँ टेलिभिजन कार्यक्रम
२०७६, १५ मंसिर आईतवार १५:४५
प्रधानमन्त्री ओलिले आईसियुबाटै सागको उद्धाटन हेर्ने ! टिभिको ब्यवस्था गरियो